जापानी महिलाहरु बुढी तथा मोटी नहुनुमा यस्तो छ कारण
HOME » जापानी महिलाहरु बुढी तथा मोटी नहुनुमा यस्तो छ कारण
सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ तर कुरा सही हो । आफ्नो दैनिकी तथा रहनसहनमा विशेष ध्यान पुर्याउने भएकाले जापानी महिलाहरु आफ्नो ढल्किदो उमेरमा पनि बुढी तथा मोटी हुँदैनन् ।
शरीरको तौललाई अनावश्यक रुपले बढ्न नदिई आफ्नो फीगरलाई मेन्टेन गर्न सक्ने महिलाहरुका बारेमा कुरा गर्नुपर्दा जापानी महिलाहरुलाई संझिने गरिन्छ । शरीरलाई भद्दा तथा अनावश्यक रुपले फराकिलो हुन नदिन जापानी लगायत एसियन महिलाहरु अग्रपंक्तीमा पर्दछन् ।
यसबारेमा एकजना हास्यकलाकारको भनाइ सापट लिने हो भने, उनका अनुसार, 'एसिएन महिलाहरु बुढी हुँदैनन् ।'
ती हास्यकलाकारले अरुलाई रमाईलो प्रदान गर्न यस्तो भनेका भने होइनन् । उनको भनाई शतप्रतिशत सत्य छ ।
जापानमा पुरुषहरुको अनुपातमा त्यहाँका महिलाहरुको आयु लामो हुन्छ र लामो आयु जिउने विषयमा जापानी महिलाहरुले धेरै विश्व रेकर्डहरु कामय गरिसकेका छन् । यस विषयमा नयोमी मोरीयामाले 'जापानीज वुमन डन्ट गेट ओल्ड अर फ्याट' विषयमा एउटा पुस्तकनै प्रकासित गरेका छन् ।
त्यसो भए जापानी महिलाहरु सधैं फिट तथा जवान देखिनका लागि के गर्छन त?
पहिलो स्थानमा आउँछ वंशानुगत । त्यसपछि दैनिक खानपान जसलाई विज्ञहरुले सर्वोतकृष्ट पौष्टीक नामाकरण गरिदिएका छन् । जापानी महिलाहरुको खानपानबाट हामीले पाठ तथा जानकारी लिन आवश्यक छ ।
जापानी महिलाहरुले प्रयोग गर्ने यी सर्वोत्कृष्ट खानेकुराहरु
२. समुद्री सब्जी
४. चामल तथा भात
६. हरियो चिया
समुद्री सब्जीमा मिनरल र भिटामीनको मात्रा अत्यधिक रुपमा आबद्ध हुन्छ । माछामा ओमेगा ३ फ्याटी एसिडको मात्रा अत्यधिक रहन्छ । ओमेगा ३ ले छालाको चमकलाई यथावत तथा तन्द्रुस्त राख्ने काम गर्छ । यसमा विषादी नाशक तत्वको मात्रा पनि अधिक रुपमा आवद्ध हुन्छ जसले क्यान्सर र चाउरीपना बिरुद्ध लडने काम गर्छ । यसमा अलजाइमर रोग बिरुद्ध लड्न सक्ने क्षमता पनि यथेष्ट मात्रामा हुन्छ ।
हरियो चियामा रहेको कफिन भन्ने तत्वले पनि छालामा चाउरीपना आउन दिदैन ।
चामल तथा भातमा प्राप्त हुने फीटोसेरामाइड भन्ने तत्वले छालाको बाहिरी भागमा सुरक्षा प्रदान गर्छ ।
प्रायजसो जापानी महिलाहरु अझैपनि आफ्नो खाना घरमै पकाउँछन् र आफ्नो खानामा चिनिको मात्रा सून्य बराबर प्रयोग गर्छन् । चिनिको मात्रा धेरै सेवन गर्नाले छाला चाउरी पर्ने, शरीरको तौल बढने र अन्य शारीरिक समस्याहरु निम्त्याउँछ ।
शारीरिक अभ्यास, दैनिकी र वंशाणुगत
हिडने बानी, हाइकिङ र सक्रिय जिवन जापानी महिलाहरुमा सामान्य मानिन्छ । जापानका ठूला सहर तथा बजारमा प्रशस्त मात्रामा खुला ठाउँहरु देख्न पाइन्छ जहाँ जापानीहरुलाई शारीरिक अभयास गरिरहेको देख्न सकिनछ ।
अनुसन्धान अनुसार, जापानी नागरिकहरु अन्य मुलुकका नागरिकहरु भन्दा शारीरिक परिक्षण बढी गराउने गर्छन् । जसका कारण उनीहरुमा रोग लागेको वा लाग्न लागेको अगावै थाहा हुन्छ ।
वंशानुले पनि ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । अझै, जापानी पुस्ता स्वस्थ खाना र प्रसस्त शारीरिक अभ्यासमा अभ्यस्त हुने भएकाले केटाकेटीहरुको जग अति बलियो हुन्छ ।
जताजतै करवृद्धि, महङ्गी, बेरोजगारी र भेदभाव मारमा जनता
मुलुकी ऐनमा कसैको अधिकार खोसिएको पाईए तत्काल सच्याइन्छः प्रधानमन्त्री ओली
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका समिति सभापतिको निर्वाचन भाद्र १७ गते
नयाँ मुलुकी ऐन संशोधन नगरे आन्दोलन गर्ने पत्रकार महासंघको चेतावनी